MACLUUMAADKA TARANKA EEYAHA EE LOO YAQAAN 'MOUNTAIN FEIST DOG DOG' IYO SAWIRRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Eeyaha ee loo yaqaan 'Mountain Feist Dog Dog' iyo Sawirro
Grey's Trigger (tricolor male) Geed (aka Mountain) Eyga ey wuxuu ka diiwaan gashan yahay National Kennel Club (NKC) iyo United Kennel Club (UKC) - 'Waxaan ugaarsadaan badiyaa dabagalo eydayada, laakiin bakaylaha iyo shimbiraha ugaadha sidoo kale. ' Lahaanshaha sawirka Treeing (aka Mountain) Feist
Dhirta Geedka Mareykanka
Dharka buushashku waa gaaban yahay oo siman yahay. Midabada Coat-ka waxaa ku jira midabbo saddex-gees leh oo leh dhibco, casaan iyo caddaan, casaan, madow, madow iyo madow, buluug iyo caddaan, guduud guduud, iyo caddaan. Madaxa wuxuu leeyahay masar dherer dhexdhexaad ah oo leh xoogaa wareegsan. Indhuhu way yar yihiin oo midab madow yihiin. Dhegaha si fiican ayaa loo hagaajiyaa dhinaca madaxa, qaab-u-eg oo xajmi leh ama taag-daran. Afku waa dherer dhexdhexaad ah oo taabasho ayuu ku socdaa. Sanku waa madow yahay midabkiisuna midabkiisu yahay sida ku cad jaakadda. Qaniinyadu waa maqas ama heer. Qoorta waa dherer dhexdhexaad ah oo xoog badan. Khadka sare waa heer. Laabta ayaa si qoto dheer u qoto dheer feerahana leh. Dhabarka ayaa toosan oo xoog badan. Baarayaasha hore waa toosan yihiin waana xoog badan yihiin. Lugaha lugaha waa muruq, oo xoogaa foorarro ah ayaa laaban. Cagaha way yar yahiin oo is dul saaran yihiin, oo leh suulasho qaanso leh iyo suuf qaro leh. Dabada ayaa sare loo dhigay oo waa la qaaday. Dhaqdhaqaaqa: Deg Deg ah oo aad u dhaqso badan, oo socodka socda.
Dulqaad badan, haddana aad loo jecelyahay. Bixiyeyaasha Mareykanka waxay tarmayaan saddex nooc oo kala duwan: Mountain Feist, Bench-legged Feist iyo Penist-tail Feist. Ugaarsiga ugaarsiga, eeygan waa heer sare. Eeyadan ayaa sidoo kale qaata bakaylaha, shimbiraha iyo ciyaar kasta oo yar. Hubso inaad tahay tan shirkadda eyga, laakiin deggan kalsooni, hogaamiye xirmo joogto ah .
shih tzu oo lagu qasay puppy of puppy
Dhererka: 10 - 22 inji (26 - 56 cm)
Miisaanka: 10 - 30 rodol (4.5 - 13.5 kg)
Noocani wuxuu u nool yahay ugaarsi. Maalmo lama qaadan karo ugaarsiga waxay u baahan tahay in lagu qaado a socod dheer ama orod. Haddii eeygu hoggaan yahay waa in laga dhigaa inuu ku cidhib qaato qofka gadaal ama hoggaanka haya gadaashiisa, sida maskaxda eeyga maskaxdiisa hoggaamiyuhu ku hoggaaminayo jidka, hoggaamiyahaasna wuxuu u baahan yahay inuu noqdo aadanaha
brussels griffon shih tzu iskudhaf eeyo yaryar oo iib ah
10 ilaa 15 sano
Buugga 'Mountain Feist' waa fududahay in la xafido. Shanlaab mar mar ah iyo cadayasho si looga saaro timaha dhintay ayaa ah waxa kaliya ee ay u baahan tahay.
Eeyaha feedhka ah (sidoo kale loo higgaadiyay gobollo kala geddisan iyo xilliyado 'fadhi' ama 'fyce') halkan ayay joogeen tobanaan sano haddaanay ahayn qarniyo ka hor. Jiir Jiir ayaa la keenay Amerika. Abraham Lincoln wuxuu qoray gabay uu ku sheegay eeyaha 'fice' ka hor Dagaalkii Sokeeye. George Washington wuxuu kaloo ku sheegay eeyaha buugiisa xusuusqorkiisa.
ATFA = Ururka Geedaha Mareykanka ee Geedaha
'Bear waa Feist Mareykan ah oo leh xariijin dhiig leh. Waa eey heer sare ah oo mustaqbal weyn leh. Wuxuu noqonayaa eey si aad ah loo doonayo da 'yar.' Lahaanshaha sawirka Mountain Valley Feist squirrel Dog Kennels
'Grommet waa American Treeing Feist, dhedig, halkaan ayaa lagu muujiyay hal sano jir. Waxay leedahay xoog aan xad lahayn oo tamar ah, waxayna jeceshahay eeyaha iyo dadka noocyadooda kala duwan. Waxay ku raaxeysataa ciyaarta ceyrsashada, ugaarsiga wax la eryanayo, dabaasha, qodista ciidda, iyo hoos seexashada daboolka. Iyadu waa xayawaan xayawaan ah oo wanaagsan, waxaanan si aad ah ugula talinayaa noocyadan qof kasta oo raadinaya eey firfircoon, xiiso leh, oo jecel. Waxay u baahan yihiin jimicsi badan iyo waqti ciyaar, waxaana doorbidayaa eey kale. '
afka madow jaalaha ah eeyga cur
Kentucky Jody (haween bunni iyo caddaan ah) Geed (aka Mountain) Ey eyga, wuxuu ka diiwaan gashan yahay National Kennel Club (NKC) iyo United Kennel Club (UKC) - 'Waxaan ugaarsadaan badiyaa xayawaanada eydayada, laakiin bakaylaha iyo shimbiraha ciyaarta sidoo kale.' Lahaanshaha sawirka Treeing (aka Mountain) Feist squirrel Dogs
Cricket waa diiwaan Smokey Mountain Feist oo halkan lagu arkay isagoo jira 6 sano.
Kodi Buugga Buurta
Kodi Buurta Feiste fuulitaanka geed
Kodi the Mountain Feist oo ku ciyaaraya barafka
bulldog buluug ah oo madow iyo caddaan ah
Sally Jo the Mountain Feist eey
'Pop-i waa badbaadin. Isagu waa geedka runta ah ee loo yaqaan 'Geed Feist Feist' kaas oo u yimaada isagoo aan ku dhicin aragtida ama urta dabagalka. Nasiib darro (nasiib wanaag aniga) warbixinta qoriga ayaa cabsi gelisay isaga sababtaas darteed ayaa loo tuuray. Ninka yar iyo saaxiibtiis, y2Katy Doodle Bug, waxay ku nool yihiin xayndaabka ugu dambeeya ee beer fog oo ku taal buuraha Bariga Tennessee. Pop-i hadda waa siddeed sano jir wuxuuna leeyahay heerka tamarta eey yar yar. Isagu waa mid bulsheed, isboorti badan waana macangag caajis ah. Waa nin jilicsan oo caado keliya oo la isweydiin karo ay tahay caadiyan inuu nadiifiyo dhagaha saaxiibtiisa ka dib markii uu biyo cabbay. Isaga jimicsi badan ayuu u baahan yahay , wuxuu jecel yahay in guriga la ceyrsado oo lagu xidho xadhig isla markaana la cuno cunno kasta ka dib. Waa weheliye cajiib ah, muuqaal qurxoon oo og inuu muuqaal fiican yahay. Habeennada qabow waxaan ku soo toosi doonaa jilbigiisa jilicsan, jaakad jilicsan oo igu dhegsan. Waad dhoola cadeyneysaa markuu qolka soo galo… waa nin gaar ah oo yar. '
Pop-i the Treeing Feist oo ka boodaya albaabka ilmaha
Eeg tusaalooyin badan oo ku saabsan Buugga 'Mountain Feist'
Mountain Feist Sawirada 1
schnauzer lagu qasay shih tzu
toy iyo mini adhijirka australia
injirta maxay u egtahay eeyaha
sawirada dogue de bordeaux